Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Arbaco Ah 11 May
HomeWarka Xiisaha LehWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta oo Arbaco Ah 11 May
May 11, 2022 Warka Xiisaha Leh, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Newcastle United ayaa xidhiidh la samaysay Barcelona iyada oo isku dayaysa inay saxeexa Philippe Coutinho ka af-duubato Aston Villa. (Goal)
West Ham ayaa isku diyaarinaysa inay xagaaga u dhaqaaqdo saxeexa weeraryhanka Aston Villa ee Ollie Watkins, Villa ayaa lagu wadaa inay 50 Milyan oo pound dalban doonto. (Guardian)
Barcelona ayaa bartilmaameed ka dhiganaysa garabka Liverpool Sadio Mane oo Bayern Munich lala xidhiidhinayay. 30 sano jirkaas ayaa doonaya inuu Barca u wareego si uu kor ugu qaado fursadiisa ku guuleysiga Ballon d’Or. (Mundo Deportivo, via Mail)
Arsenal ayaa liiska xiddigaha ay xagaaga doonayso ku darsaday Serge Gnabry oo hore ugu soo ciyaaray haatana Bayern Munich ka tirsan. (Ekrem Konour)
Barca ayaa diyaar u ah inay sanadkii mushahar u siiso daafaca Chelsea ee Cesar Azpilicueta balse sababo la xidhiidha sharciga dhaqaalaha ee Yurub aan wax dalab lacageed ah ka gudbin karin. (Goal)
Tottenham daafaceeda bidix ee Sergio Reguilon ayaa bartilmaameed u ah Barcelona. (Mirror)
Chelsea iyo Man United ayaa xiisaynaya saxeexa khadka dhexe ee RB Leipzig ee Christopher Nkunku. (Sky Sports Germany)
Real Madrid ayaa 340 Milyan oo pound ku xidhay heshiiska uu ugu soo wareegayo daafaca dhexe ee Chelsea ee Antonio Rudiger, qandaraaskiisa ayaa ah afar sano oo uu toddobaadkii mushahar u qaadanayo £315,000. (Mail)
Leicester City ayaa rajaynaysa in Youri Tielemans uu kooxdeeda ka tago xagaagan iyaga oo dhagaysan doona dalabaadka gaadhsiisan 40-ka Milyan ee pound ee xiddigaas oo heshiiskiisu 2023 dhacayo laga soo gudbiyo. (90 Min)
Arsenal ayaa kamida kooxaha lala xidhiidhinayo saxeexa Youri Tielemans balse rajadeeda saxeexiisa ayaa ku xidhan inay Champions League usoo baxdo marka hore. (Standard)
Manchester United iyo Newcastle ayaa xiisaynaya saxeexa weeraryahanka Napoli ee Victor Osimahen balse kooxdiisa ayaa ugu yaraan 100 Milyan oo euro ku doonaysa iibkiisa. (Calciomercato, via Football Italia)
Lazio madaxweynaheega Claudio Lotito ayaa sheegay inuu dhawr sano kahor diiday dalab 140 Milyan oo euro ah oo laga soo gudbiyay khadka dhexe ee Milinkovic-Savic oo haatan lala xidhiidhinayo Man United iyo Paris St-Germain. (Rai Sport, via Talksport)
Manchester United ayaa diyaar u ah bixinta 38-ka Milyan ee pound ee lagu jabin karo heshiiska daafaca dhexe ee Sporting Lisbon ee Goncalo Inacio. (A Bola – in Portuguese)
Sevilla ayaa xagaaga la saxeexan karta garabka Arsenal ee Nicolas Pepe oo lagu qiimeeyo £25 Milyan. (Super Desporte, via Mirror)
AC Milan ayaa xiisaynaysa daafaca dhexe ee Arsenal ee William Saliba oo amaah ugu maqan Marseille. (Mirror)
Walow ay soo baxeen warar sheegaya inuu wadahadalo heshiis kordhin la bilaabay Arsenal haddana warar kale ayaa sheegaya in Mohamed Elneny uu heshiis la gaadhay Galatasaray. (Fanatik – in Turkish)
Pogba ayay tahay inuu mushahar dhimis sameeyo haddii uu doonayo ku laabashada Juventus halka PSG ay heshiis mushahar badan usoo bandhigtay, Real Madrid ayaa isha ku haysa xaalada 29 sano jirkaas. (Alfredo Pedulla, via Football Italia)
Leeds United garabkeeda Raphinha ayaa u ballanqaaday Barcelona inuu kusoo biirayo haddii kooxdiisu heerka hoose u dhacdo. (Todo Fichajes)
Tottenham ayaa u muuqata mid Man United ku garaacaysa saxeexa goolhayaha West Bromwich bilaashka kaga tagaya ee Johnstone oo kaabis u noqon doona kabtan Hugo Lloris. (Standard)
Spurs ayaa ka fikiraysa inay Yaya Toure shaqo tababarenimo siiyaan marka uu qaato calaamadiisa tababarenimo ee UEFA bixiso. (Standard)
Manchester United ayaa ku dhaw inay Ajax kala heshiiso tababare ku xigeenka Mitchell van der Gaag oo ay u rabaan inuu la shaqeeyo Erik Ten Hag. (Fabrizio Romano)